AHS Star Taissa Farmiga ayaa ku jili doonta 'Conjuring' Spin Off 'Nun' oo ku jirta Kaalinta Cinwaanka
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh AHS Star Taissa Farmiga ayaa ku jili doonta 'Conjuring' Spin Off 'Nun' ee Kaalinta Cinwaanka
AHS Star Taissa Farmiga ayaa ku jili doonta 'Conjuring' Spin Off 'Nun' ee Kaalinta Cinwaanka
Waxaa qoray Patti Pauley
Warar waaweyn oo cabsi naxdin leh kasoo baxaya Hollywood-ka subaxnimadii maanta maaddaama New Line ay sidaas ku dhawaaqday Story naxdin baa American iyo Gabdhaha ugu dambeeya Xiddigta Taissa Farmiga ayaa lagu wadaa inay ku jilayso gabadha yar ee sooryada ah ee aadka loo sugayo Isku xirka murti, Nun. Warka oo si gaar ah loo soo sheegay Deadline, waxay layaab igu noqotay layaableh Isniinta-Isniinta ee Isniinta ', sidaan hubo inaan cadaabku arkin kan imanaya In kasta oo, ay macno samaynayso maaddaama Farmigas 'aysan ku cusbeyn Conjuring caalamka.
Warbixinta ayaa ka macaan maadaama ay walaasheed ka weyn Taissa, Vera Farmiga ay ku jilaysay labada filim ee James Wan Isku xirka filimada sida maskaxda Lorraine Warren oo ay weheliyaan Patrick Wilson oo ah Ed Warren. Soosaaraha naxdinta soo socota James Wan qudhiisa, ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay in Taissa ay ku soo biirto jilayaasha Twitterka:
Welcome @taissafarmiga reerka! Hadafku waa inuu la shaqeeyo dhammaan Farmigas-ka. @VeraFarmiga #Nun #tahadalka https://t.co/ZlWAKbKq47
Filimkii uu Director ka ahaa Corin Hardy (The Hallow) oo uu curiyay Annabelle iyo Stephen King ee IT qoraa Gary Dauberman oo uu weheliyo James Wan oo sidoo kale ku fadhiya kursiga soo saaraha oo ay weheliyaan Peter Safran, waa astaamaha labaad ee foojignaanta ee ka socda filimada The Conjuring si ay u hesho miisaaniyad miisaaniyadeed oo weyn. Runtiina ma ahan wax adag in la arko sababta. Nun oo markii ugu horeysay ka soo muuqday The Conjuring 2 wuxuu ahaa 100% wax xun oo nacasnimo leh oo ku saabsan filimkaas. In kasta oo muuqashadu kooban yihiin, haddana way ku filnayd in laga fogaado kaniisadaha Katooliga meel kasta, oo keliya ayaa la siiyaa kuwa ka qaybgalaya dugsiyadaas adag ee ay maamusho nimanku, riyooyin xunxun toddobaadyo dhammaad ah.
Maxaad u malayn in Taissa Farmiga ay qaadanayso doorkan naxdinta leh ee casriga ah? Hoos ka dhawaaji, oo dhinac istaag Nun war soo baxay!
Sumcad sawir leh: ImaanshahaSoon.net
iskuxirka lafdhabartakiliyaha adagGary DaubermanWararka Filimka Naxdinta lehfilimo naxdin lehJames WanTaissa FarmigaIsku xidhkaNunfilimka nunfilimada naxdinta leh ee soo socda
Sawirada 'Goobta Walaasheed' Funko ee Imaanaya Xagaagan
"20 Second to Live": Wareysiga Abuuraha Ben Rock iyo Bob DeRosa